Ninkii 51 qof oo Muslimiin ah ku laayay dalka New Zealand oo xabsi daa’in lagu xukumay | HalQaran.com
Home Warar Cusub Ninkii 51 qof oo Muslimiin ah ku laayay dalka New Zealand oo...
Ninkii 51 qof oo Muslimiin ah ku laayay dalka New Zealand oo xabsi daa’in lagu xukumay
New Zealand (Halqaran.com) – Maxkamadda sare ee dalka dalka New Zealand ayaa Khamiista maanta ah xabsi daa’in ku xukuntay Brenton Tarrant, oo sanadkii hore Muslimiin fara badan ku laayay waddankaasi.
Ninkan ayaa 51 qof oo Muslimiin ahaa ku dilay laba Masaajid oo ku yaala Magaalada Christchurch, 15-kii bishii March ee sanadkii 2019.
Ka hor inta aan xukunkiisa lagu dhawaaqin ayuu Garsooraha Maxkamadda dhageystay doodihii ay kiiskiisa ku soo gebagabeynayeen dacwad oogaha maxkamadda iyo qareenkii difaacayay.
Garsooraha Maxkamadda, Cameron Mander ayaana ku dhawaaqay xukunka ninkaasi inuu yahay xabsi daa’in.
Xeer Ilaaliyaha Maxkamadda Mark Zarifeh, ayaa sheegay inaanu ninkaasi ku filnayn xabsi daa’in oo keliya, haddii ninka u dhashay dalka Australia aanu muujin xitaa in uu ka xun yahay falkaasi.
Sidoo kale, xeer Ilaaliyaha ayaa sheegay inaysan jiri doonin sabab ninkaasi xabsiga looga sii daayo, xitaa haddii ay noqoto waxa uu ugu yeeray sii deyn sharafeed, noloshiisa inta ka dhimana uu xabsiga ku dhameysan doono.
“Dembiyadaadu aad ayay u xun yihiin, xitaa haddii lagu xiro illaa aad ka dhimato, kuma filna ciqaabta aad mudan tahay.” Ayuu yiri Mark Zarifeh.
“Ficiladaadu waxay ahaayeen wax ka baxsan bani’aadanimada, mana aadan samayn wax naxariis ah. Ma tihid gacan ku-dhiigle oo keliya, balse waxaa tahay argagixiso.” Ayuu sii raaciyay Zarifeh.
Ugu dambeyn, waxay aheyd ninkan sida bareerka ah u laayay 51 qof oo Muslimiin ah ay ciqaabtiisa noqoto dil toogasho, waxaase taasi diidaya shuruucda u degsan dalkaasi oo xukunka dilka aanu ku jirin.
ninkii muslimiinta laayay
xabsi daa'in lagu xukumay